HomeWararka MaantaZanetti Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Kubada Cagta
Cadalool-(Arbaca -May-7) – Halyeygii iyo kabtankii xulka Argentina iyo Naadiga Inter Milan ee Javier Zanetti ayaa si rasmi daboolka uga qaaday inuu ka fadhiisanayo ciyaarista kubada cagta dhamaadka xili ciyaareedkan oo ay ka hadhsan yihiin laba kulan.
Laacibkan 40 sanno jirka ah oo dhaawac daranila soo darsay xili ciyaareedkii hore, ayaa sanadka oo dhan ay dhibaato ku haysay inuu dhamaysto wakhtiga ciyaarta xili ciyaareedkan socda oo dhan, 11 ciyaarood oo kali ahna u saftay kooxdiisa Inter tartamada oo dhan intii uu haystay naadiga tababare Walter Mazzarri.
Gudoomiyaha naadiga president Erick Thohir ayaa todobaadkii hore sheegay in xidiga reer Argentina uu kabaha iska saari doono dhamaadka xili ciyaareedkan, door cusubna kooxda ka soo galli doono, Zanettina hawshaas kale dardar gallin doono kadib 22 sanno uu uu ciyaaraha ku soo jiray kana soo Tirsanaa Inter.
“Inaad 40 jir ciyaaraha kaga fadhiisato waa arin naadir ah oo aan had iyo jeer dhicin , aadna u xiiso badan. Naftayda ayaan ku qanacsanahay, waana xiligii ay ugu haboonayd,” ayuu ku yidhi wargeyska La Nacion .
“Kadib dhaawacii i soo gaadhay sanadkii hore, Waxaan doonayay inaan cadeeyo inaan la soo noqdo kubadii xirfada ahayd, waanan sameeyey taas.
“Waxaan ku riyoon jiray anoo xirfadayda kubada cagta ku soo afjaray Inter, Inter waa gurigayga, waxaanaan isku dayi doonaa inaan waxtar ku yeesho garoonka dibadiisa , sidii aan ugu lahaa garoonka gudihiisa.
“Waxaan noqon doonaa Agaasimaha ciyaaraha – Dar dar gallinta horumar cusub. Waxaan rajaynayaa inaan wax ka baran doono.”
Zanetti, oo Inter kaga soo biiray kooxda Banfield sanadkii 1995-kii, wuxuu u saftay kooxda in ka badan 850 kulan, waxaanu kula guulaystay shan horyaal oo Serie A ah , hal Champions League Iyo koobab badan oo kale.
In kastoo aan lagu soo darin ciyaarihii 2006 iyo 2010 ee koobka aduunka , hadana isaga ayaa wali haysta rikoodhka 145 ciyaarood oo uu u saftay qarankiisaArgentina , waxaanu ka qayb gallay labadii koob aduun ee 1998 iyo 2002 .
Ranieri: Anigaa Qaadaya Horyaalka, Tottenham Ha Sugto Sannad Kale
Xog qarsoodi ah Oo ku duugan halka Uu Tababare Van Gal la damacsan Yahay Rooney
25/06/2014 Khadar Dirir